Misy fanavaozana vaovao ho an'ny Apple TV izao | Vaovao IPhone
Pablo Ortega | | Apple tv, iPhone, About us, Apple products
Ny keynote an'i Apple ny alatsinainy lasa teo dia tena matevina ka ny sasany tamin'ireo vaovao nambara dia navadika tany ambadika tany. Ny iray amin'ireo lohahevitra voalohany noresahin'i Tim Cook dia mifandraika amin'ny Apple TV. Ny CEO an'ny Apple dia nandroso «izany tmbola betsaka ny zavatra hita amin'ity departemanta ity ”ary ny tanjon'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia ny hahatratra ny mpanjifa maro kokoa ity fahitalavitra ity. Noho io antony io, ny Apple TV dia nandany $ 99 ka hatramin'ny $ 69, vidiny mora vidy sy mifaninana kokoa.
Ho fanampin'izany, Apple dia hanolotra, manokana, ny fanombohana ny sehatra fandefasana HBO vaovao, izay havoaka amin'ny volana ambony any Etazonia ary hamela antsika hiditra amin'ny atiny rehetra ao amin'ny tambajotra fahitalavitra, ao anatin'izany ny andiany toy ny «Game of Seza fiandrianana ». Ny fampiharana nohavaozina izay ahafahantsika miditra amin'ity karazana atiny ity dia ho tonga amin'ny volana ambony ary mitentina $ 15 isam-bolana (vidiny lafo raha raisintsika fa $ 8 isam-bolana ihany no vidin'ny Netflix ary manome atiny bebe kokoa). Taorian'izany dia nanambara fanavaozana rindrambaiko i Tim Cook. Navoaka ho an'ny iPhone sy iPad ny iOS 8.2 fa ny Nahazo ny fanavaozana kely ihany koa ny Apple TV an'ny rindrambaiko.
Miditra amin'ny fanovana- General - fanavaozana ny lozisialy, azonao atao ny misintona ny firmware kinova 7.1 ho an'ny Apple TV. S
Raha mitantana ny setanao Apple ianao dia ho tsikaritrao matetika misy bibikely am-polony izay ahitsy avy amin'ity kinova ity amin'ny. Ny iray tamin'izy ireo, ohatra, dia indraindray tsy naseho ho toy ny screensaver ny sarinay, zavatra izay nojerentsika tamin'ny kinova 7.1 ary hitanay fa mandeha tsara ilay izy. Nisy ihany koa ny olana tamin'ny Netflix raha niverina tany amin'ny menio lehibe, bibikely iray hafa izay toa namboarina.
Fanavaozana tena ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Misy fanavaozana vaovao ho an'ny Apple TV izao
Ruben Vazquez Fernandez dia hoy izy:
Fantatrao raha manakana ny fampiasana Plex izany?
Valiny tamin'i Ruben Vazquez Fernandez
Xsolutions dia hoy izy:
satria mihevitra izy ireo fa rehefa nanambara ny vidin'ny HBO dia tsy nisy nitehaka, dia ny vola 15 dolara dia vola be loatra raha tsy mahita andian-tantara raha toa ka kely ny vidin'ny hulu sy netflix
Valiny amin'ny Xsolutions
[…] Miditra amin'ny fanavaozana ny Settings- General- Rindrambaiko, azonao atao ny misintona ny kinova 7.1 an'ny firmware ho an'ny Apple TV. S
Raha mitantana ny set Apple ianao dia ho hitanao matetika fa misy […]
lahatsoratra tsara 🙂
azizo dia hoy izy:
rahoviana isika no handeha jailbreak apple tv3 ios7.0.3
Mamaly an'i azizo